Izigaxa ezinhle kakhulu zezinja nezinye izindlela zazo | Izinja World
Nathi Cerezo | 02/11/2021 11:33 | Kubuyekezwe ku- 08/11/2021 16:22 | Izesekeli zezinja
Izigaxa zezinja ziyithuluzi eliwusizo kakhulu futhi elidingekayo ngemva kokuba inja yakho ihlinzwe, kodwa futhi inzima futhi ayikhululekile kubo ngoba, nakuba ivimbela ukuba ilume futhi iklwebhe amanxeba, iyayivimbela ekudleni nasekuphuzeni ngokujwayelekile.
Ngalokho, Kulesi sihloko mayelana nezigaxa ezinhle kakhulu zezinja ngeke sikhulume kuphela ngama-cones amahle kakhulu ongawathola emakethe, kodwa futhi nezinye izindlela, ezimangazayo, ezingakusiza ukuba udlule lesi siphuzo esibi futhi wenze impilo yesilwane sakho sibe lula. Ngaphezu kwalokho, sincoma futhi ukuthi ufunde lesi sihloko mayelana indlela yokwelapha ukwesaba udokotela wezilwane.
I-TRIXIE Veterinary Collar ...
1 Isigaxa esihle kakhulu sezinja
1.1 Ikhola ka-Elizabeth ene-velcro
1.2 Ikhola evuthayo
1.3 Isudi yokutakula emnyama
1.4 I-vest yokubuyisela
1.5 I-Classic cone yepulasitiki
1.6 I-cone inflatable enebhande elilungisekayo
1.7 Ikhola ethambile ekhululekile kakhulu
2 Kufanele uze nenja yami nini?
3 Izinhlobo nezinye izindlela zamakhoni
3.1 Isigaxa sePlastiki
3.2 Izigaxa ezithambile
3.3 Ikhoni elivuthayo
3.4 Ingubo yokubuyisela
4 Ungathenga kuphi izigaxa zezinja
Isigaxa esihle kakhulu sezinja
Ikhola ka-Elizabeth ene-velcro
Izigaxa zokudla ...
Enye yezigaxa zezinja ezinhle kakhulu e-Amazon yile modeli yakudala eyenziwe nge-PVC ne-velcro. Kulula kakhulu ukuyifaka, ngoba kufanele uyibeke entanyeni yesilwane kuphela (khumbula ukusishiya isikhala esanele sokuphefumula). Le modeli imelana kakhulu futhi ungakhetha osayizi abambalwa, ukuze uthole leyo evumelana kangcono nenja yakho, landela izilinganiso ezisetafuleni.
Okunye ukuphawula kugqamisa ukuthi kunjalo kancane futhi mfushane kwezinye izinja. Abanye, nokho, bagcizelela ukuthi kukhululekile kakhulu nokuthi umugqa wendwangu ovala unqenqema uwusizo kakhulu ukuze inja ingazilimazi.
Umgexo we-YAMI ...
Uma ufuna okuthile okuhlukile futhi okunethezekile enja yakho, i-cone inflatable iyindlela enhle. Lokhu kuhlanganiswe ngendwangu ethambile futhi, ngaphezu kwalokho, kusiza kakhulu ukunyakaza kwenja yakho, ngoba kumvumela ukuba adle futhi aphuze ngokunethezeka. Ngaphezu kwalokho, ivuthela futhi ihlahleke kalula, okugcina isikhala uma kuziwa ekugcineni. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi lo modeli awusebenzi nazo zonke izinhlobo zezinja, njengoba lezo ezinemilenze emide namafinyila (njengamaDobermans, amaDalmatians ...) ungakwazi ukufinyelela kalula endaweni ofuna ukuyigwema. .
Isudi yokutakula emnyama
Enye inketho ethakazelisa kakhulu yabanikazi bezinja abahlushwa ikakhulukazi ama-cones. Amasudi okubuyisela anjengalawa avikela indawo, kungakhathaliseki ukuthi inxeba, i-suture, noma ibhandishi, ngaphandle kokukhawulela noma yikuphi ukunyakaza kwenja. Khetha kahle usayizi ukuze ungacindezeli noma udubule ngokweqile lapho ufaka isudi. Lo modeli wenziwa ngekotini ne-lycra, okwenza kube nokunwebeka futhi kuphefumule ngesikhathi esifanayo.
I-Dotoner Vest ...
Enye enye indlela ye-cone yezinja, efana nomkhiqizo odlule. Njengoba sishilo, kusiza kakhulu ukunyakaza kwezinja. Ngaphezu kwalokho, uma inja ivuliwe, ngeke nje ikwazi ukudla nokuphuza kalula, kodwa futhi izikhulule, njengoba imhlane yakhe ibonakala. Le modeli inezinkinobho futhi inendingiliza okufanele uyinqume uma inja yakho iyiduna.
I-Classic cone yepulasitiki
Le khoni ilungile, nakuba ngezinye izikhathi singadingi lutho olunye. Kushibhile kakhulu (cishe € 7), kulula kakhulu ukuyifaka futhi iqukethe ikhoni yepulasitiki exhunywe entanyeni yesilwane nge-velcro. Imiphetho imbozwe ngendwangu ukuze ingahlikihli. Ezinye izisho zithi, uma inja inekhala elide kancane, isigaxa ngeke siyivimbele ukuthi ifike endaweni esingayifuni.
I-cone inflatable enebhande elilungisekayo
I-Nasjac Necklace ...
Enye ikhola enhle ye-inflatable yile modeli engabandakanyi nje izakhi ezifanayo njengeminye imigexo efanayo, njengendwangu ethambile eyimboza noma kalula ukuyigcina, kodwa futhi ibhande elisebenzayo lokulungisa ikhola ekhanda lenja. Itholakala ngosayizi ababili, uM no-L, futhi ingahlanzwa kalula kakhulu ngoba ungasusa ikhava efakwe uziphu.
Ikhola ethambile ekhululekile kakhulu
UJames Nensimbi Bonke Abane ...
Okokugcina, ngokunokwenzeka ikhola enethezeke kakhulu ohlwini (ngaphandle kwamasudi okubuyisela, yebo) yile cone e-squishy. Ingabe eyenziwe inayiloni, inamathiselwe kukhola futhi inesici sokuthi ingahle yehliswe ngokuphelele.. Ngenxa yokuthi ithambile, inja ingalala noma idle futhi iphuze ngokunethezeka kuyo, njengoba ikhubazekile, nakuba kamuva kuyodingeka sizame ukuyibuyisela.
Kufanele uze nenja yami nini?
Gqoka ikhoni, ngokusobala akusona isizathu sobuhle noma esingahleliwe, kodwa kufanele sikhonjiswe udokotela wezilwane. Ngokuvamile, izinja kufanele zigqoke ikhoni ezimweni ezimbili:
Okokuqala, uma behlinziwe. I-cone ivimbela inja ekunwayeni enxebeni noma ukudonsa noma ukukhotha imithungo. Ngakho, isilonda siphola kangcono futhi ngokushesha futhi ingozi yokutheleleka iyancipha.
Okwesibili, udokotela wezilwane naye angase akutshele lokho inja yakho kufanele igqoke ikhoni uma kwenzeka ilandela indlela yokwelashwa okufanele igweme ukunwaya noma zilume endaweni ethile.
Uyakubona lokho Lezi yizimo ezimbili ezibaluleke kakhulu empilweni yenja yakho, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo okulungile kubalulekile ukuze lesi sisekeli esingajabulisi sifeze umsebenzi waso kahle.
Ngaphezu kokusetshenziswa kwezilwane, i-cone ingasetshenziswa nakwezinye izimo, isibonelo, lapho uziyisa kumlungisi wezinwele, ukuvimbela ukuba balume into esingayifuni noma ukuyiphatha ngaphandle kokwesaba, nakuba kufanele ukhumbule ukuthi ayikhululekile neze, ngakho-ke akufanelekile ukuyisebenzisa ngokungakhethi.
Izinhlobo nezinye izindlela zamakhoni
Izigaxa zezinja akuzona kuphela isigaxa sayo yonke impilo ongayithola kudokotela wezilwane. Okwamanje, kukhona amamodeli ahlukahlukene kanye nezinketho ezingase zikhululeke kakhudlwana enja yakho, ngokwesimilo namasiko abo.
Ikhoni evamile ngokuvamile ipulasitiki ecacile, ongayithenga kunoma yimuphi udokotela wezilwane. Ayikhululeki kakhulu, ngaphezu kwalokho, ikhulisa imisindo futhi iyayihlanekezela, okuthinta kakhulu ukuzwa kwenja yakho, noma ilinganisele umkhakha wayo wokubona, ngakho ingathola uvalo olukhulu ngokuyigqoka, okungenani ize ijwayele. Ngaphezu kwalokho, kwenza ukunyakaza kwakho kube nzima kakhulu, okwenza kube nzima kuwe ukuthi udle noma uphuze.
Izigaxa ezithambile Ziyindlela ehlukile kuneyamapulasitiki aqinile, ngoba enza kube lula ukuthi inja ithole ukudla neziphuzo. Ngaphezu kwalokho, bakhululekile kakhulu ukugqoka. Nokho, nazo ziletha inkinga ethile. Isibonelo, ngenxa yokuthi yenziwe ngezinto ezithambile, ngezinye izikhathi lolu hlobo lwe-cone lulahlekelwa ukuma kwalo, lapho inja ingabuyela khona emanxebeni.
Zisikhumbuza kakhulu ama-cushions aphefumulayo ajwayelekile okulala ezindizeni. Ngokuvamile zimbozwe ngendwangu ukuze kukhululeke kakhudlwana ukugqoka. Njengama-cone athambile, akwenza kube lula kakhulu ukuthi inja idle futhi iphuze, nakuba inkinga yabo enkulu ingubuthakathaka: kulula kakhulu ukuba inja ibhoboze ngengozi futhi iyiqede, ngakho-ke kufanele uqaphele ikakhulukazi ukuze lokhu kungenzi. kwenzeka.
Enye indlela ephelele yama-cones yizingubo zokubuyisela, okuyinto Ahlanganisa ngokuqondile lokho, engutsheni efakwa enja ukuze ingangeni enxebeni.. Bakhululekile njengoba bevumela inkululeko ephelele yokunyakaza, nakuba inja yakho ingase ikhungatheke uma ingajwayele ukugqoka izingcezu zezingubo. Qiniseka ukuthi uthenga usayizi ongemkhulu kakhulu noma omncane kakhulu.
Ungathenga kuphi izigaxa zezinja
Nakuba bengezona i-athikili evame kakhulu, ngenhlanhla singathola izigaxa izinja kalula, nakuba ziyohlala ngaphezulu noma kancane izindawo ezikhethekile. Phakathi kwezivamile, isibonelo:
Amazon, inkosi yezinto ezingahleliwe, ikulethela ikhoni oyifunayo emnyango wendlu yakho uma unenkontileka yayo ye-Prime option. Ngaphezu kwalokho, inezinhlobo ezihlukahlukene, njengama-inflatable, okuhlosiwe noma amasudi okubuyisela.
I-Las izitolo ezikhethekile njenge-TiendaAnimal noma i-Kiwoko nabo banamakhoni ambalwa esitokweni sabo. Nakuba bengenakho ukuhlukahluka okuningi njenge-Amazon, ikhwalithi yabo yinhle kakhulu futhi ayatholakala ngamasayizi amaningana ukuze ukwazi ukukhetha evumelana kangcono nenja yakho.
Ekugcineni, i odokotela bezilwane Ziyindawo yakudala kakhulu yokuthenga izigaxa zezinja. Nakuba kuyiwo avame ukuba namamodeli ambalwa, ngaphandle kokungabaza yiwo angakunikeza iseluleko esiqondene nawe nesilwane sakho esifuywayo.
Izigaxa zezinja zinento eyodwa kuphela enhle: ukuthi zijwayele ukuthatha izinsuku ezimbalwa. Kodwa-ke, kubalulekile ukucabangela ukunethezeka kwesilwane sethu, ngakho-ke sithemba ukuthi sikusize ngalokhu kukhetha. Sitshele, wake wagqoka inja yakho? Ucabangani ngala mamodeli ahlukene? Iyiphi evumelana kangcono nesilwane sakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ama-cones angcono kakhulu ezinja nezinye izindlela zazo